IHuawei iqinisekisa ukuba bayasebenza kwinkqubo yabo yokusebenza | I-Androidsis
Iqinisekisiwe: IHuawei isebenza kwenye indawo kwi-Android
Kuye kwaxelwa iinyanga ukuba IHuawei inokusebenza kwinkqubo yayo yokusebenza. Enye indlela eya kwi-Android enokuthetha utshintsho olukhulu kwintengiso. Kude kube ngoku, le yingxelo engekhe iqinisekiswe nangayiphi na indlela. Kodwa oku kutshintshile, kuba umphathi womenzi waseTshayina ebephethe ukungqinisisa ezi ndaba.
Ewe, amarhe afikileyo kwezi nyanga ayinyani. IHuawei isebenza kolunye uhlobo kwi-Android, eyakho inkqubo. Kwaye sinezizathu eziphambili zokuba kutheni umenzi waseTshayina ephuhlisa le nkqubo yokusebenza.
Esona sizathu siphambili sokuba lo myalelo womenzi unikezele kukuba kuHuawei boyika oko Isigqibo kwezopolitiko e-United States sithetha ukuba abanako ukusebenzisa i-Android kwiifowuni zabo. Oku kuya kuba yinto ebalulekileyo kwintengiso yakho. Ubudlelwane phakathi kwe China ne-United States abulunganga, kwaye inyani, iMelika iyalukhaba uphawu.
Ukusukela urhulumente waseMelika ucele ukuba bangasebenzisi iifowuni zeHuawei. Ude wathumela iileta nakwamanye amazwe ecela ukuba iifowuni zorhwebo zingasetyenziswa kulawulo loluntu. Ke uphawu lubonakala lulungiselelwe eyona nto imbi kakhulu malunga noku. Isizathu sokuba basebenze kule nkqubo.
Okwangoku, ayaziwa ukuba iya kuba ligama lokugqibela, kodwa iya kubizwa ngokuba yi-Kirin OS. Asazi ukuba liphi ixesha lenkqubo yophuhliso ngoku abakule nkqubo yokusebenza. Siyazi kuphela ukuba okwangoku bakhule ngokupheleleyo. Banokusinika iindaba ezininzi kungekudala.
Into engaqinisekiswanga kukuba ingaba iHuawei izakusebenzisa eyayo inkqubo yokusebenza kwimeko yeengxaki zomthetho neMelika, okanye ukuba baceba ukuyisebenzisa njengomgangatho kwiifowuni zabo kwixa elizayo. Siyathemba ukwazi okungakumbi ngayo, kuba ithembisa ukuba sisihloko esinomdla kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Iqinisekisiwe: IHuawei isebenza kwenye indawo kwi-Android
Amabali e-Instagram ngoku angabucala
Ungalilinganisa njani ixesha olichitha kuFacebook